बालकृष्ण ढुंगेलबारे ‘गुमनाम’ बाबुराम भट्टरार्इ गोविन्द केसीलाई छुटाउन सडकमा ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बालकृष्ण ढुंगेलबारे ‘गुमनाम’ बाबुराम भट्टरार्इ गोविन्द केसीलाई छुटाउन सडकमा !
बालकृष्ण ढुंगेलबारे ‘गुमनाम’ बाबुराम भट्टरार्इ गोविन्द केसीलाई छुटाउन सडकमा !
पुस २५ गते, २०७४ - १०:५८
काठमाडौं । सोमबार हिजो साँझ पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीको रिहाई माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई सडकमा उत्रिएका छन् । बाबुराम मात्रै होईन सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री गगन थापा र विवेकशील साझा पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्रलगायतका टोली केसीको रिहाईको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुसँगै केसीका समर्थकहरु माइतीघर मण्डलामा भरिभराउ छन् ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को डीनमा शशि शर्मालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि केसी प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै सोमबार अनसनमा बसेका थिए । उनी अनसनस्थलबाटै मानहानीको मुद्धामा पक्राउ परेका हुन् ।
बाबुरामले माइतीघर मण्डलाबाट डा. केसीको पक्षमा नारा लगाइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा भने उनको विरोध भइरहेको छ । बाबुरामले केसीको पक्षमा वकालत गरेको भने विरोध भएको भने होईन । तर केसीको पक्षमा सडक तताउन सक्ने पूर्वमाओवादीसमेत रहेका बाबुरामले किन बालकृष्ण ढुंगेलको बिषयमा एक शब्द पनि खर्चिएनन् ? माओवादीले सञ्चालन गरेको १० बर्षे जनयुद्धमा हत्या गरेको आरोपमा ढुंगेल यतिबेला जेलमा छन् । केहि महिनाअघि मात्रै पक्राउ परेका ढुंगेलको बिषयमा बाबुराम सामाजिक सञ्जालमा पनि एक शब्द खर्च गर्न नसकेको केहि माओवादी नेताहरुले बताउन थालेका छन् । जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेमध्येका एक नेता बाबुरामले ढुंगेललाई भेट्न त परि जाओस् एक शब्द पनि नखर्चिनाले पनि उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिएको भन्ने बुझिन्छ ।
जनयुद्ध सफल भएकै कारण बाबुराम मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदै अहिले माओवादीबाट फुटेर बनेको नयाँ शक्ति पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर त्यहि जनयुद्ध सफल बनाउने अहोरात्र युद्ध मैदानमा खटिने ढुंगेलबारे भने उनी गुमनाम जस्तै छन् ।
पुस २५ गते, २०७४ - १०:५८ मा प्रकाशित